Obere traktị Japanese | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Obere traktị Japanese
Uru nke iji obere traktọ na ubi, iwu nke oke
E bu n'obi maka ndi oru ugbo bu ndi choro igbanwe ugbo ozo "sovdepovsky" na ohuru ohuru, nakwa maka ndi nwe ndi na-aru oru na-ahọrọ ihe kacha mma maka akpo ha. Anyị ga-ewebata gị obere-traktị, gwa gị otu ịhọrọ ịkwanyere obere traktọ maka ịnye, dee ihe niile bara uru na nkwekọrịta nke usoro a ma kụziere gị otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi.
Esi họrọ otu onye na-esi na Japan
Ozugbo enwere ọchịchọ ma ọ bụ mkpa ịzụta ngwaahịa ọ bụla, mkpebi doro anya ịchekwa ga-apụta na ya. Kedu ihe ka mma iji? Eji ya ma ọ bụ yiri maka ọnụahịa ahụ, mana ọhụụ na "Chinese"? N'isiokwu taa, anyị ga-achọpụta ihe kachasị mma ịzụta: eji mpempe akwụkwọ Japanese ma ọ bụ Chinese ọhụrụ?
Apple na-akpọ mmanụ aṅụ uto - Ọdịiche Korobovka
Umu di ime: ihe odi mkpa ka i mara
Esi na-etinye nsen n'okpuru toki
Ubi okooko osisi, ma obu otu esi eme ka akwukwo nri mara mma?
Ụzọ kacha mma 6 kacha mma isi gbasaa tomato. Ntughari ala na ndụmọdụ bara uru
Pears a mịrị amị dị mfe ma baa uru.
Ndi mara banyere na-eto eto carrots site na seedlings: uru na ndi mmadu nke usoro, usoro, ndi oru ugbo
Osisi na-acha odo odo Ogige nke Tibet na-ehichapu arịa ọbara - usoro nchịkọta ọdịnala, usoro ya na usoro nnweta